တစ်ဦးက 1080p တီဗီဆိုတာဘာလဲ - ထိုအခါအဘယ်ကြောင့်ဒါဟာအရေးကြီးသလား
လမ်းညွှန်များဝယ်ယူ တီဗီ & Home Theater
အားလုံး 1080p တီဗီအကြောင်း
1080p 1,080 လိုင်းများ (သို့မဟုတ် pixel တန်း) မှာတီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဆင့်ကဲပြသကိုယ်စားပြုတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောလိုင်းများသို့မဟုတ် pixel အတန်း scan ဖတ်သို့မဟုတ်ပြသနေကြသည် တဖြည်းဖြည်း ။ အဘယ်အရာကိုကြောင်းကိုယ်စားပြုမျက်နှာပြင်အနှံ့ 1,920 pixels ကိုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ line သို့မဟုတ် pixel အတန်းနှင့်အတူထိပ်တန်းကနေအောက်ဆုံးမှအပြေး 1,080 pixels ကိုဆင့်ကဲအခြားပြီးနောက်တစ်ဦးကိုပြသသည်။ တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်ဧရိယာပေါ်တွင်ပြသထားသောစုစုပေါင်း pixels အရေအတွက်ရရန်သင့်အား 2.073.600 သို့မဟုတ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2.1-megapixels နဲ့ညီမျှ 1,920 x1,080, များပြား။
ဘာ 1080p တီဗီအဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်အထက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါဗီဒီယိုကပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြရန်နိုင်လျှင်တစ်ဦးက TV ကိုတစ်ဦး 1080p တီဗီအဖြစ်ခွဲခြားသို့မဟုတ်ရောင်းချခဲ့နိုင်ပါတယ်။
1080p resolution နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြရန်နိုင်သောတီဗီများ၏ချမှတ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သောတီဗီနည်းပညာများအမျိုးအစားများပါဝင်သည် Plasma , LCD ကို , အိုအယ်လ်အီး နှင့် DLP ။
မှတ်ချက်: DLP နှင့် Plasma တီဗီနှစ်ဦးစလုံးရပ်စဲခဲ့ကြပေမယ့်နေဆဲသူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်သောသူတို့အဘို့ဤဆောင်းပါးအတွက်ရည်ညွှန်းခြင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်တစ်ဦးအသုံးယူနစ်သို့ပြေးကြသည်။
ကဲ့သို့သောအနိမ့် resolution ကိုဗီဒီယိုကအချက်ပြမှုများကို, ဖော်ပြရန်တစ် 1080p တီဗီဘို့အလို့ငှာ 480p , 720p နှင့် 1080i ကရပါမည် upscaling သူတို့အားအဝင်အချက်ပြ 1080p ရန်။ တစ်နည်းတစ် TV ပေါ်မှာ 1080p display ကိုပြည်တွင်းရေးလာခြင်းနှင့်အတူတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖြောင့်ဝင်လာသော 1080p signal ကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်သင်ပြုသောအမှုနိုင်ပါသည်။
1080p / 24 vs / 60 1080p
တစ်ဦး 1080p input ကို signal ကိုလက်ခံသောနီးပါးအားလုံး HDTV တိုက်ရိုက် 1080p / 60 အဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုလက်ခံနိုင်သည်။ 1080p / 60 လွှဲပြောင်းတစ်ဦး 1080p signal ကိုကိုယ်စားပြုပြီး (ဘောင်နှင့်အတူအသက် 30 ပျဉ်ပြား, စက္ကန့်လျှင်နှစ်ကြိမ်ပြသ) 60 frames များကို-per-ဒုတိယတစ်မှုနှုန်းမှာပြသ။ ဒါကစံတိုးတက်သောစကင်ကို 1920x1080 pixel video signal ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
သို့သော် Blu-ray disc ၏ထွန်းနှင့်အတူ, 1080p တစ်ဦး "သစ်" အပြောင်းအလဲကိုလည်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်: 1080p / 24 ။ အဘယ်အရာကို 1080p / 24 ကိုကိုယ်စားပြု (ထိုကဲ့သို့သော Blu-ray disc ကိုအပေါ်တစ်ဦးရုပ်ရှင်ကဲ့သို့) တစ်ဦးအရင်းအမြစ်မှ၎င်း၏ဇာတိ 24 frames များကို-per-ဒုတိယတိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းစံ 35mm ရုပ်ရှင်၏ဘောင်နှုန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးပုံရိပ်ကိုပိုမိုစံရုပ်ရှင်ကြည့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတစ်ဦး HDTV အပေါ်တစ်ဦး 1080p / 24 image ကိုဖော်ပြရန်အလို့ငှာထဲမှာ, HDTV တစ်စက္ကန့်ကို 24 frames များကိုမှာ 1080p resolution နဲ့တစ်ဦး input ကိုလက်ခံဖို့နိုင်စွမ်းရှိသည်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းတီဗီများအတွက်, အားလုံး Blu-ray disc ကစားသမားလည်း output ကို 720p, 1080i, ဒါမှမဟုတ် 1080p / 60 အချက်ပြမှုများဟုသတ်မှတ်ခံရနိုင်ပြီး, များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်, Blu-ray Disc player ကိုသင့်လျော်သော resolution ကို / frame ကို detect ပါလိမ့်မယ် နှုန်းမှာအလိုအလျှောက်။
အဆိုပါ 720p တီဗီ Conundrum
စားသုံးသူများသတိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကြောင်းနောက်ထပ်အရာတစ်ဦး 1080p input ကို signal ကိုကိုလက်မခံပေမဲ့ 1920x1080 ထက်အမှန်တကယ်နိမ့်သောဇာတိ pixel resolution နဲ့ရှိစေခြင်းငှါတီဗီဖြစ်ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်အဲဒီတီဗီသာအလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်လည်ပတ်နေသည့် screen ပေါ်မှာ pixels ကို၏အရေအတွက်ကိုပြသနိုင်သည်ကိုဆိုလိုတယ်ကြောင်း, (720p တီဗီအဖြစ်ရာထူးတိုးထားတဲ့) 1024x768 သို့မဟုတ် 1366x768 ဇာတိ pixel resolution နဲ့ဖြစ်စေနဲ့ TV ကိုမဝယ်လျှင်။ ရလဒ်အနေနဲ့က 1024x768 သို့မဟုတ် 1366x768 pixel resolution နဲ့အတူ TV ကိုအမှန်တကယ်ပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ် Screen ပေါ်မှာကြောင့် signal ကိုဖော်ပြရန်အလို့ငှာတစ်ဦးအဝင် 1080p signal ကို downscale ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာအချို့အဟောင်းတွေ 720p တီဗီ 1080p input ကိုအချက်ပြမှုများကိုလက်ခံကြပါဘူး, ဒါပေမယ့် input ကိုအချက်ပြ 1080i အထိကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ အရေအတွက်ကဝင်လာသော pixels ကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ယှက်ပုံစံ (pixels ကိုအသီးအသီးတန်းတစ်ခုထူးဆန်း / ပင် sequence ကိုအတွက်တနည်းပေးပို့ထားပါသည်), ထက်တစ်တိုးတက်သော format နဲ့ (တစ်ဦးချင်းစီမှာ Pixel တန်းဆင့်ကဲလှေတျတျောမူသညျ) အတွက် input ကိုဖြစ်ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ်ဦး 720p တီဗီဝင်လာသော signal ကိုစကေးကိုက်ဖို့ရှိပါတယ်မသာပေမယ့်လည်း "deinterlace" သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပုံရိပ်ကိုပြသနိုင်ရန်အတွက်တစ်တိုးတက်သောပုံရိပ်ကိုစယှက်နွယ်ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဆိုလိုတယ်သင်သည် 1024x768 သို့မဟုတ် 1366x768 ဇာတိ pixel resolution နဲ့ဖြစ်စေနဲ့ TV ကိုဝယ်ယူရန်လျှင်, ထိုသင် screen ပေါ်မှာမြင်ရပါလိမ့်မည်ဆုံးဖြတ်ချက်ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်; တစ်ဦး 1920x1080p ပုံရိပ်ကို 720p မှ downscaled ပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်တစ် 480i ပုံရိပ်ကို 720p မှ upscaled လိမ့်မည်။ ရလဒ်များ၏အရည်အသွေးဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့ circuitry တီဗီပေါ်မှာဘယ်လောက်ကောင်းအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ 4K Factor
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ယူနောက်ထပ်အရာများ၏ရရှိနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ် 4K resolution ကိုအကြောင်းအရာရင်းမြစ်များ ။ ဒါဟာ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, ကြောင်းထောက်ပြရန်အရေးကြီးပါသည် Sharp က Quattron Plus အား (မရှိတော့ရရှိနိုင်ပါသည်) ကိုသတ်မှတ် , 1080p တီဗီ 4K resolution ကို input ကိုအချက်ပြမှုများကိုလက်ခံလို့မရပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦး 1080p တီဗီဖွင့်စကေးနှင့်ဒါ့အပြင်ဖန်သားပြင် display ကိုများအတွက်ချိန်ညှိနိုင်သည့် 480p, 720p နှင့် 1080i input ကိုအချက်ပြ, မတူဘဲသူတို့ကမပေးနိုင် (မှတ်ချက်ချခြွင်းချက် မှလွဲ. ) တစ်ဦး 4K resolution ကို video signal ကိုလကျခံပွီး screen ကိုခင်းကျင်းပြသဘို့အချစကေး။
အမျိုးမျိုးသောဇာတိ display ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အတူရရှိနိုင်တီဗီရှိပါတယ်ပေမယ့်, စားသုံးသူအဖြစ်, ဤသူသည်သင်တို့ရောထွေးမသွားပါစေပါဘူး။ စိတျထဲတှငျသင်သည်သင်၏တီဗီနေရာမရရှိနိုင်ရှိသည်အာကာသ, သင်တိုသည်ဗီဒီယိုသတင်းရင်းမြစ်အမျိုးအစားများ, သင့်ဘတ်ဂျက်သိမ်းဆည်းထားပါနှင့်, သင်တန်း, သင်မည်သို့မြင်ပုံရိပ်တွေကိုသင်ကြည့်ရှုပါ။
သငျသညျ 40 လက်မထက်သေးငယ်တစ်ဦး HDTV များဝယ်ယူထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်သိသာလျှင်, အမှန်တကယ်အမြင်အာရုံသုံးခုအဓိက high-definition ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကြားခြားနားချက်, 1080p, 1080i နှင့် 720p မှာအားလုံးအနည်းငယ်မျှသာရှိပါသည်။
အဆိုပါပိုကြီးတဲ့မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား, 1080p နှင့်အခြားဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကြားခြားနားချက်ပိုမိုသိသာ။ သငျသညျ 40 လက်မသို့မဟုတ်ပိုကြီးတဲ့ screen ကိုအရွယ်အစားနဲ့ HDTV တစ်ဦးဝယ်ယူထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် (ရရှိနိုင်ပါသည် 1080p တီဗီအများကြီးထက်နည်း 40 လက်မမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားရှိပေမယ့်), ကအနည်းဆုံး 1080p ဘို့သွားကြဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မျက်နှာပြင် 4K Ultra HD TV ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း (40 လက်မအရွယ် screen အရွယ်အစားစတင် 4K Ultra HD TV ကိုရှိပါတယ်ပေမယ့်) 50 လက်မနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောအရွယ်အစား။
: အပိုဆောင်း 1080p အပေါ်သတင်းအချက်အလက်, အထူးသဖြင့်ယင်း၏တူညီနှင့် 1080i နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားမှုအဖြစ်သင်သည်သင်၏ HDTV ထဲကအများဆုံးရရန်လိုအပ်သည်အဘယ်, ငါ၏အဖော်ဆောင်းပါးများကိုထုတ်စစ်ဆေး 1080p vs 1080i နှင့် အဘယ်အရာကိုသင်တစ်ဦး HDTV အပေါ် high definition resolution ဖို့လို ။
သငျသညျသစ်တစ်ခု TV အတွက်စျေးဝယ်နေတယ်ဆိုရင်, ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များထုတ်စစ်ဆေး 1080p LCD ကိုများနှင့် LED / LCD ကိုတီဗီ 40 လက်မနှင့်အပိုကြီးသော , 720p နဲ့ 1080p 32 မှ 39 လက်မအရွယ် LCD နှင့် LED / LCD ကိုတီဗီ နှင့် 4K Ultra HD TV ကို။
Shared Composite / စိတျအပိုငျးဗီဒီယို Input အား Connections ကို
Commentary - Blu-ray Format ကို၎င်း၏ 10th နှစ်မြောက်အမှန်ခြစ်
တစ်ဦးကနေအိမ်ပြဇာတ်ရုံ Setup ကိုဘယ်လောက်ပါသလား?
နှိုင်းယှဉ်မှုမြား: A Store မှာခုနှစ်တွင် vs အွန်လိုင်းဝယ်ယူ
တစ်ဦးကို TV တိုးချဲ့အာမခံဆိုတာဘာလဲ
သစ်ကို Apple TV ကိုအကြောင်း 10 ဂရိတ်အရာ
အဆိုပါ7အကောင်းဆုံးက Samsung တီဗီ 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ
2018 ခုနှစ်တွင် Buy ဖို့7အကောင်းဆုံးစျေးပေါတဲ့တီဗီ
Windows7မှာ Run command
အဆိုပါအသက် 25 အကောင်းဆုံးအခမဲ့ '' Must-ရှိသည် '' အိုင်ပက် Apps ကပ
နည်းပညာဆိုင်ရာတင်ဆက် 10 လုပ်ဆောင်စရာများနှင့် Don'ts
Geofences နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကလေးများ၏ Track သိမ်းဆည်းထားပါ
TeacherTube မှာအခမဲ့ပညာရေးဗီဒီယိုများ stream
5 ခြေလှမ်းများအတွက် Excel ကိုတစ်လိုင်းဇယား Create နှင့်ပုံစံများ
Destiny cheat, Cheat ကုဒ်များနှင့်ဗျူဟာလမ်းညွှန်
တစ်ဦးကအဆင့်-by-step လမ်းညွှန် toUsing SQL Server အမှားကိုင်တွယ်ရန် ... ကိုဖမ်းစမ်းကြည့်ပါ
သင်က CMYK အရောင်မော်ဒယ်အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
တစ်လူမှုအင်ဂျင်နီယာတိုက်ခိုက်အသိအမှတ်ပြုဘို့4သိကောင်းစရာများ
အန်းဒရွိုက်သို့မဟုတ် Windows ဖုန်းများအတွက် Siri ကို Get လုပ်နည်း
အဆိုပါကို Nintendo Switch ဆိုတာဘာလဲ
Packet.dll တွေ့သည်သို့မဟုတ်လက်လွတ်မအမှား Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
သင်၏ Android တွင်ကက်ရှ်ဒေတာများကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦး Silicondust HDhomerun ချုပ် Cablecard ဖမ်းစက် Installing
တစ် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်း မှစ. တစ် PDF ကို Creating
Windows Live Mail ကိုတစ်ဦးနောက်ခံပုံရိပ်ထည့်သွင်းနည်း
သင့်ရဲ့ Firewall ကိုစုံစမ်းလုပ်နည်း
တစ်ချိန်တည်းမှာအသံနဲ့ PowerPoint Animation ရဲ့ Play
Chromebook သည် မှစ. Apps ကပကိုဖျက်ပစ်ရန်ရန်ကဘယ်လို